Xalka maalgashiga adeegga eber - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Xalka maalgashiga eber ee adeega
Xalka maalgashiga eber ee adeega
Hordhac: Xaqiijinta kaydinta xogta uma baahna maalgelin raasumaal ah. Marka muhiimada xogta aysan sareynin, nidaamku wuu fududahay, loomana baahna otomaatig iyo badbaadin waqti dheer ah, waxaa suurtagal ah in loo isticmaalo kheyraadka jira si loo dhiso nidaamka keydinta xogta iyada oo aan la helin wax maalgashi raasumaal ah.
Xalka maalgashiga eber
Ogaanshaha keydka xogta uma baahna maalgelin raasumaal ah. Marka muhiimada xogta aysan sareynin, nidaamku wuu fududahay, loomana baahna otomaatig iyo badbaadin waqti dheer ah, waxaa suurtagal ah in loo isticmaalo kheyraadka jira si loo dhiso nidaamka keydinta xogta iyada oo aan la helin wax maalgashi raasumaal ah.
Tusaale ahaan, ku kaydso xogta shakhsi ahaaneed jawi xafiis fudud. Nidaamyada ka shaqeeya desktop-ka sida Windows iyo Linux, badankood waxay dhexgalaan qaar ka mid ah howlaha keydinta xogta fudud. Hawlahan gurmadku waxay ku filan yihiin in lagu xaqiijiyo keyd otomaatig ah oo joogto ah faylasha guud. Waxa kale oo jira barnaamijyo badan oo keyd ah oo yar yar oo hawlo wanaagsan qabta oo laga soo dejisan karo internetka. In kasta oo barnaamijyadan aysan taageeri karin xog-ururin heer-xirfadeed ah, haddana waxay ku filan yihiin nidaamyada xafiiska desktop-ka guud.
Sida keydinta xogta keydka ah, waxaad dooran kartaa booska bilaashka ah ee diskiga maxalliga ah ama booska adeegga shabakadda. Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa amaan ah in la doorto booska server-ka network, maxaa yeelay marka diskiga maxalliga ah uu guuldareysto, diskka oo dhan waxay u egtahay in aan la geli karin, marka xogta keydka ah ee ku keydsan diskiga maxaliga ah ayaa lumineysa macnaheeda.
Soo Koobid: Kaydinta kaligaa taagan; xog yar; Looma baahna shuruudaha kaydinta muddada-dheer, si looga hortago luminta xogta; ma jiraan codsiyo xog-ururin xirfadeed; nidaamka waa la xidhi karaa wakhti kasta; soo kabashada xogta gacanta.
10,000 ilaa 20,000 yuan xal maalgashi
Nidaamyada qaar ee u baahan in la keydiyo xogta muddo dheer, ma aha wax dhaqaale ahaan in si fudud loo kaydiyo xogta keydka ee shabakadda shabakadda. Cajalad lagu duubo iyo cajalado qaar waa in loo iibsadaa keydinta xogta muddada dheer. dhexdhexaad ah Guud ahaan, qiimaha wadista cajaladdu waxay ku saabsan tahay 10,000 illaa 20,000 yuan. Kadib iibsashada cajalad duubis ah, ma jirto lacag lagu iibsado barnaamijyada keydka ah, macno malahan. Dhibaatada waxaa lagu xallin karaa iyadoo wali la adeegsanayo hawsha kaydinta ee la socota nidaamka. Xaqiiqdii, xog badan oo nidaamka ah ayaa loo baahan yahay in la keydiyo muddo dheer, laakiin ma jiro shuruud otomaatik sare ah, iyo xaddidaadaha waqtiga dhimista la qorsheeyay ma ahan kuwo adag Xaaladdan oo kale, haddii aanu jirin codsi keyd weyn oo xog-uruurin ah, shuruudaha keydka xogta guud ahaan waa la xallin karaa.
Tusaale ahaan, boggaga internetka ee heer shaqsiyeed, nidaamyada caafimaad ee yar yar, nidaamyada faylalka yar yar, iwm. Laakiin qaabka xogta asal ahaan waa qaab feyl ah, ma jiro qaab dhismeed kaydsan oo adag, waana gebi ahaanba la oggol yahay in la joojiyo keydinta xogta. Baahidaas oo kale, softiweerka keydka ah ee ku dhex jira nidaamka hawlgalka oo lagu daray mashiin cajalad ah ayaa si buuxda u garan kara kaydinta tooska ah ee nidaamka maalinlaha ah.
Soo Koobid: Kaydinta kaligaa taagan; mugga xogta guud; keydinta xogta muddada-dheer ayaa loo baahan yahay; ma jiro codsi xirfad-yaqaan; xiritaanka qorshaysan waa la oggol yahay; soo kabashada xogta gacanta.
30,000 ilaa 50,000 yuan ayaa ku maalgaliyay xalka
Marka nidaamku u baahan yahay inuu kaydiyo xogta iyada oo loo marayo shabakadda, howlaha isku-dhafan ee isku-dhafan ee nidaamka hawlgalka ma dabooli karo baahida. Waqtigaan, marka lagu daro iibsashada qalabka cajaladaha, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad iibsato barnaamijyo xirfadlayaal ah oo xirfadle ah si aad u gaarto gurmadka shabakadda Guud ahaan, qiimaha agabyada softiweerka ah ee keydka loogu talagalay barnaamijka 'Windows platform' ma badna, maalgashiga softiweerka ee 20,000 illaa 30,000 yuan waa inuu awoodaa inuu gaaro himilooyinka naqshadeynta. Ku darista qiimaha wadista cajaladda 10,000 ilaa 20,000 yuan, qiimaha guud waxaa lagu xakamayn karaa inta udhaxeysa 30,000 ilaa 50,000 yuan.
Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu horey u taageeri karaa codsiyada keydka xogta qaarkood wuxuuna xaqiijin karaa soo kabashada xogta otomaatiga ah. Nidaamyada xafiisyada dhexdhexaadka ah, bogagga internetka ee xirfadleyda yar yar, iyo shabakadaha kambaska yar-yar, nidaamkan wuxuu si buuxda u gaadhay ujeeddada ilaalinta xogta. Waa in la ogaadaa in xalkaani kaliya loogu talagalay nidaamka martigelinta ee Windows, Linux iyo barnaamijyada kale. Haddii barnaamijka martigeliyaha uu yahay minicomputer Unix, maalgashiga noocaas ahi ma awoodi doono inuu buuxiyo shuruudaha shaqada.
Soo Koobid: Kaydinta shabakadda fudud; Nidaamka nidaamka hawlgalka ee Windows; celceliska xogta; keydinta xogta muddada-dheer ayaa loo baahan yahay; codsiyada keydka macluumaadka qaarkood; xiritaanka qorshaysan waa la oggol yahay; soo kabashada xogta otomaatiga ah.
100,000 yuan xal maalgashi
Marka muhiimada xogta nidaamka ay sarreyso, maalgashiga keydinta xogta ayaa kordhin doonta si waafaqsan. Gaar ahaan marka nidaamka loo baahan yahay in la heli karo 7x24 saacadood oo uusan jirin daaqad waqti ah oo loogu talagalay shaqada keydka ah si loo joojiyo keydka, nidaamka keydku waa inuu lahaadaa awood uu ku kaydiyo faylasha furan, waxa loogu yeero tikniyoolajiyadda internetka. Tani waxay u baahan tahay barnaamijka keydka ah inuu noqdo mid awood badan leh. Isla mar ahaantaana, kororka shuruudaha otomatiga nidaamka, maareynta gacanta ee cajaladaha cajaladda way adag tahay in la daboolo baahiyaha nidaamka. Marka xaddiga xogta aysan aad u weyneyn, waxaad tixgelin kartaa inaad soo iibsato otomaatig (AutoLoader) oo loogu talagalay maareynta cajaladda iswada.
Shuruudaha noocan oo kale ah, baahida loo qabo maal-gashiga lagu maalgeliyay softiweer iyo qalabba waa kordhay. Guud ahaan, maalgashiga softiweerka kaydinta khadka tooska ah ee barnaamijka Windows waa inuu noqdaa 60,000 ilaa 80,000 yuan, qiimaha autoloader sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay 30,000 yuan, marka maalgelinta nidaamka guud asal ahaan waa qiyaastii 100,000 yuan.
Nidaamka keydka ee lagu aasaasay maalgashigan wuxuu taageeri karaa jawi ballaadhan oo shabakad Windows ah, halkaas oo faylasha, codsiyada keydka, nidaamyada boostada, macluumaadka isticmaaleyaasha iyo macluumaadka kale ay noqon karaan kuwo dhexe oo mideysan. Nidaamka keydka ayaa gebi ahaanba otomaatig ah, iyada oo aan faragelin gacan qabasho ah. Intaa waxaa sii dheer, marka noodhka nidaamka uu ku guuldareysto, soo kabashada xogta gebi ahaanba waa otomatig iyo caqli badan Ilaa iyo inta la helo keyd dhexdhexaad ah iyo qalab lagu bilaabi karo qalab bilow ah, barnaamijka keydinta ayaa soo celin kara gobolka kahor nidaamka.
Deegaanka arjiga ee nidaamkan keydku sidoo kale waa mid aad u ballaaran. Shabakada kambaska ee dugsiyada hoose iyo sare, waaxda ganacsiga ganacsiga damaanada, nidaamka isku xirka xafiisyada wakaaladaha dowlada, nidaamka iskuxirka shirkadaha dhexdhexaadka ah, iyo websaydhada elektaroonigga ah ee sugaysa ayaa asal ahaan ah heerkan baahida. Laga soo bilaabo macno gaar ah, heerkan dalabka nidaamka ayaa ah midka ugu ballaaran. Noocan ah habka keydinta xogta waxaa lagu dabaqi karaa jawi shabakad aad u dhib badan oo asal ahaan ka kooban barnaamijka Windows. Marka laga eego dhinac kale, dadka isticmaala heerkan sidoo kale waa xoogga ugu weyn ee ka kooban baahida suuqa keydka.
Soo Koobid: Kaydinta shabakad-dhexdhexaad ah; Nidaamka nidaamka hawlgalka ee Windows; mugga xogta badan; keydinta xogta muddada-dheer; codsiyada keydka xogta caadiga ah; nidaamka boostada iyo xog kale oo xirfadle ah; gurmad aan joogsi lahayn; soo kabashada xogta caqliga leh.
In kabadan 300,000 yuan maalgashi
Marka mugga xogta uu gaaro heerka terabyte, hal cajalad wadayaal ah iyo otomaatig ayaa mar dambe buuxin karin baahiyaha maareynta otomaatigga ah, waxaana loo baahan yahay aaladda maktabadda cajaladda oo leh darajo heer sare ah oo otomaatig ah. Guud ahaan, nidaamka nidaamka qalliinka ee bey'addan wuxuu ku saleysnaan doonaa Unix, ama nidaam isku dhafan oo isku dhafan oo ka kooban nidaamyo badan oo hawlgal. Deegaankaan, kakanaanta ilaalinta xogta ayaa sii kordhay. Jawiga caadiga ah ee habka isugeynta, maalgashiga nidaamka keydinta xogta asal ahaan wuxuu ka badan yahay 300,000 yuan.
Haddii 300,000 yuan loo isticmaalo xisaabinta, qaybta softiweerku waxay ku saabsan tahay qiyaastii 30-40% maalgashiga, taas oo loo adeegsado in lagu soo iibsado server sare ee keydka softiweerka iyo wakiillada macaamiisha ee taageera barnaamijyada Unix, iyo sidoo kale qaar ka mid ah barnaamijyada isku xirnaanta xogta iyo cajalad barnaamijyada taageerada maktabadda, iwm qaybta. Midda kale 60 ~ 70% ee lacagaha waxaa loo isticmaalaa in lagu soo iibiyo qalabka maktabadda cajaladda iyo tiro cayiman oo cajalado ah. Haddii aad u baahan tahay inaad hirgeliso xogta keydka ah ee 'LAN Free backup' oo ku hoos jirta qaab dhismeedka SAN, waxaad u baahan tahay inaad ku darto qiyaastii 100,000 yuan maalgashiga raasumaalka si aad u dhisto qeybta isbeddelka fiilooyinka indhaha.
Xalkani ma aha oo kaliya inuu si buuxda u ogaan karo shaqada keydinta xogta ee otomaatiga ah ee nidaamka isku dhafan, taageerida codsiyada kala duwan ee baaxadda weyn leh, iyo inuu ogaado 7x24-saac oo aan joogsi lahayn xogta qadka tooska ah, laakiin sidoo kale xaqiijiyo keydinta xogta bilaashka ah ee LAN iyada oo aan la haysan ilaha shabakadda . . Isla mar ahaantaana, xalka noocan oo kale ah, shaqada dib u soo kabashada nacasnimada xogta mar dambe muhiim maaha. Kakanaanta kakanaanta qaabdhismeedka nidaamka iyo kakanaanta xiriirka xogta, dib u soo kabashada caqliga doqonimada caqli la'aanta ah ee faragalin la'aanta gacanta ayaa inta badan sababi doonta iswaafaq la'aan nidaamka gobolka. Waxaa lumay macnaha soo kabashada xogta. Heerkan adeegsiga deegaanka, nidaamku wuxuu ubaahan yahay xakameyn dabacsan oo badan habka soo kabashada xogta iyo waxyaabaha kujira. Nidaamku waa inuu awoodaa inuu bixiyo soo kabashada xulashada xogta iyo soo kabashada gobolka waqti cayiman.
Heerkan nidaamka keydinta xogta waxaa guud ahaan loo isticmaalaa nidaamyada keyd ballaaran ee ballaaran. Tusaale ahaan, nidaamka xogta xarumaha shirkadaha waaweyn, heer gobol iyo heer degmo nidaam macluumaad gaar ah, machadka cilmi baarista cilmiga nidaamka macluumaadka, nidaamka guud ee soo helida macluumaadka, iwm. , xasiloonida iyo helitaanka nidaamyada ganacsiga, oo gebi ahaanba uma oggolaan waqti-dhimis qorshaysan iyo mid aan qorsheysnayn duruuf kastoo jirta. Guud ahaan, waxaa jira xayiraad adag oo cad oo ku saabsan qabsashada ilaha nidaamka ee howlaha kaydinta. Guud ahaan, durdurrada xogta keydka ah looma oggola inay qabsadaan qaddarro badan oo kheyraadka ballaadhinta shabakadda. Marka la soo koobo, heerkan codsigan, nidaamka kaydinta waxaa loo arkaa inuu yahay nidaam madax-bannaan, hawsha kaydintana durba waa qayb lama huraan u ah howlaha caadiga ah ee nidaamka oo dhan. Suuqa loogu yeero-dhamaadka sare waxaa loola jeedaa baahida suuqa ee arimahan.
Soo Koobid: Kaydinta shabakad ballaaran; Unix ama dhufto ee nidaamka hawlgalka badan; mugga xogta illaa heerka TB; keydinta xogta muddada-dheer; codsiyada keydka xogta ballaaran; xogta kale ee xirfadeed sida nidaamyada boostada; dhameystir gurmad aan joogsi lahayn; soo kabashada xogta dabacsan; ma laha shabakadaha Kheyraadka xadka.
Maalgashi ka badan 1 milyan yuan
Nidaamyada keydinta heerka dhexe ee xogta, dhismaha nidaamyada keydinta xogta sidoo kale si weyn ayey u kordheen. Tani waxay badanaa sabab u tahay laba sababood: xaddiga xogta badan iyo kororka shuruudaha amniga. Xaqiiqdii, nidaamka kaydinta heerka dhexe ee xogta heer sare ah, shuruudaha shaqada ee nidaamka keydku kama badna kuwii heerkii hore. Si kastaba ha noqotee, mugga xogteeda ee tobanaan ama xitaa boqolaal terabytes ayaa labanlaabay qiimaha qalabka ee qalabka maktabadda cajaladda. Intaas waxaa sii dheer, mar haddii xogtaan lumaan ama waxyeelo soo gaarto, cawaaqib xumadu waxay noqon doontaa mid aad u daran, sidaa darteed badankood nidaamyadooda keydinta qadka waxay sidoo kale isticmaalaan dib u soo kabashada masiibada fog iyo qaabab kale, taas oo sii kordhinaysa barnaamijyada iyo kharashaadka qalabka nidaamka kaydka ee la shaqeeya . Guud ahaan, nidaamka kaydinta xogta ee lashaqeeya nidaamka ka soo kabashada masiibada fog wuxuu leeyahay qaddar maalgashi oo aan ka yarayn 1 milyan yuan.
Nidaamka noocan ah ee aadka u weyn, saamiga maalgashiga software-ka ee nidaamka keydku guud ahaan waa 20 ~ 30%, iyo maalgashiga qalabka ee aqlabiyadda, 70 ~ 80%. Asal ahaan ma jiraan wax isbeddel ah oo ku saabsan waxyaabaha iibsiga ah. Qeybta softiweerku asal ahaan waa server-ka keydka ah, macmiilka keydka ah, moduleka keydka keydka macluumaadka, moduleka taageerada maktabada cajalad, iwm. Qeybta qalabka qalabka, asal ahaan waa maktabada cajaladda iyo qalabkeeda ku xiran. Dabcan, jawigaas baaxadda weyn leh, cajalad wax iibsigu sidoo kale waa maalgashi raasamaal ah oo aan la iska indho tiri karin.
Waxa xiisaha lihi waxa weeye maalgashiga intaa le'eg, nidaamka keydinta xogta ee la dhisay wuxuu leeyahay fursado aad u yar oo soo food saara cilladaha nidaamka. Sababtoo ah nidaamkan keydinta heerka dhexe ee xogta ayaa gaarey heerkii ugu sarreeyey ee shuruudaha helitaanka xogta, inta badan nidaamyada keydinta qadka waxay adeegsadaan badeecooyinka ugu xasilloon xilligan waxayna la shaqeeyaan teknolojiyadda ugu horumarsan si loo hubiyo in xogta aan lumin. Markaa ma waxay ka dhigan tahay in nidaamka noocan ah ee keydku aanu macno lahayn? Dabcan maya! Xaqiiqdii, xarun sidan u weyn, muhiimad kale oo nidaamka keydka ah ayaa soo baxday, taasi waa, keydinta feylasha. Waan ognahay in si kasta oo ay u horumarsan tahay tignoolajiyada nidaamka keydinta internetka, waxay kaliya damaanad qaadi kartaa in xogta hadda jirta aysan lumin doonin ama dhaawici doonin, mana caawin karto nidaamka duubista xogta taariikhiga ah ee la soo dhaafay, iyo shaqada nidaamka keydinta. waa halkan. Xogta iyo xaaladda loo baahan yahay in loo hayo falanqaynta midaysan ayaa gebi ahaanba lagu hayaa nidaamka kaydinta.
Tusaale ahaan, nidaamka kaydinta xogta cimilada ee Xarunta Saadaasha Hawada Qaranka, xogta biilasha ee xarunta biilinta isgaarsiinta, xogta macaamil dhigista dhigaalka ee xarunta xogta bangiga, iyo wixii la mid ah. Nidaamyadan keydinta waxay leeyihiin nidaamyo kaydinta khadka tooska ah oo aad u xoog badan, ilaalintooda xogtooduna aad ayey u xoog badan tahay xitaa haddii ay dhacdo musiibo sida dab iyo dhulgariir, waxay xaqiijin kartaa in xogta aan lumin. Si kastaba ha noqotee, nidaamyadan ayaa aasaasay nidaam keyd maalgashi oo aad u weyn, shaqadiisa ugu weyni ay tahay in la badbaadiyo macluumaadka taariikhiga ah ee muhiimka ah iyo xaaladda falanqaynta xogta mideysan iyo macdanta xogta.
Dabcan, nidaamyada keydinta heerka dhexe ee xogta, shilalka ayaa si aad ah u dhaca mararka qaarkood. Waxaa laga yaabaa in qof waliba wali xasuusto fashilka shilka ah ee nidaamka shabakada ee Madaarka Caasimada waqti aan fogayn. Tani waxay muujineysaa in si kasta oo ay u xoog badan yihiin tallaabooyinka ka hortagga shilalka, ay lama huraan tahay inay jiri doonto xilli boqol sir la lumiyo Waqtigaan, doorka nidaamka keydku wuu dhalaalayay, waxayna ahayd mid kufilan in lagu daboolo maalgashiga weyn. Xaqiiqdii, haddii uusan jirin nidaam kayd ah, shilka ka dhacay Madaarka Caasimadda wuxuu sababi doonaa wax ka badan uun tobannaan daqiiqo oo daahitaan ah.
Soo Koobid: Kaydinta shabakadda heerka dhexe ee xogta; Unix ama dhufto ee nidaamka hawlgalka badan; mugga xogta illaa tobanaan TB ah; keydinta xogta muddada-dheer; codsiyada keydka ee waaweyn; nidaamyada boostada iyo xogta kale ee xirfadeed; dhameystir gurmad aan joogsi lahayn; soo kabashada xogta dabacsan; malaha ilaha bandwidth shabakadda la wareegsan; lashaqee nidaamka ka soo kabashada masiibada fog; ogaadaan shaqada keydinta xogta.
Xiga:Warbixinta cilmi baarista waxay sheeganeysaa in silsiladda warshadaha gudaha ee Shiinaha si tartiib tartiib ah loo aasaasayo